Soo-saareyaasha & Shirkadaha Xaraashka Xaraashka ah ee PVC - Shirkadda Shiinaha ee PVC PVC xumbada xumbada
4mm sheet PVC caag ah
Guddiga xumbada bilaashka ah ee PVC waa nooc ka mid ah guddiga xumbada PVC. Sida laga soo xigtay habka wax soo saarka, guddiga xumbo PVC loo qaybin karaa guddiga xumbo qolof PVC iyo guddiga xumbo free PVC. Guddiga xumbo ee PVC waxaa sidoo kale loo yaqaan guddiga Schaeffer iyo guddigaI iyo. Ka koobnaanta kiimikada waa PVC.
3mm guddiga xumbo PVC
Marka loo eego tiknoolajiyada hadda jirta, waxaan ku siin karnaa alwaaxa xumbo PVC ah 1-30mm. Iyaga dhexdooda, 3mm guddiga xumbada PVC waa qeexitaan aad loo jecel yahay. Macaamiisha ayaa inta badan u isticmaala daabicista iyo sameynta looxyada xayeysiinta.
UV daabac 2mm
UV-ga 2mm la daabacay waa nooc ka mid ah guddiga xumbada lacag la’aanta ah ee PVC, dhammaantoodna waxay ka tirsan yihiin xaashida xumbada PVC. Guddiga xumbada PVC waxaa loo qaybin karaa guddiga xumbada PVC celuka iyo guddiga xumbo la'aanta PVC iyadoo la raacayo habka wax soo saarka.
1mm PVC xaashida xumbada bilaashka ah waxay ku jirtaa qaab dhismeedka gacanta iyo nadiifinta dusha sare ee dusha sare waxay ka dhigeysaa xulasho ku habboon daabacadaha takhasuska leh iyo kuwa sameeya boorarka iyo sidoo kale qalab ku habboon qurxinta dhismaha. Xaashida guddiga xumbada PVC ayaa si ballaaran loogu isticmaalay calaamadaha, boorarka, bandhigyada iwm.